Bruno Fernandes Oo La Sheegay In Loo Magacaabayo Kabtanka Manchester United - Gool24.Net
Bruno Fernandes Oo La Sheegay In Loo Magacaabayo Kabtanka Manchester United
Bruno Fernandes waxa hubaal ah inuu noqon doono kabtanka Manchester United mustaqbalka dhow, sida uu sheegay mid ka mid ah tababareyaashiisii hore.
Xiddiga reer Portugal oo bishii January kusoo biiray Manchester United ayaa waxa uu dhaliyey 12 gool 22 ciyaarood oo uu saftay, waxaana uu naadiga ka tiiriyey khadka dhexe oo hore ay uga dheelisanaayeen iyadoo kooxduna noqotay mid kubbad qurux badan la timid oo taageereyaashu ku riyoonayaan inay guulo degdeg ah gaadhi doonaan kaddib toddoba sannadood oo ay qalbi jab kusoo jireen.
Siddeed ka mid ah goolashiisa ayaa uu ka dhaliyey horyaalka Premier League, halka uu tartanka Europa League na noqday ciyaartoyga ugu goolasha badan waxaana isku-darka goolashii uu usoo dhaliyey Sporting Lisbon iyo Man United ay ahaayeen siddeed.
Sannadihii ugu dambeeyey, waxa uu Fernandes soo ahaa hoggaamiyaha kooxdiisii Lisbon oo marka laga yimaaddo ciyaartiisa iyo farsamooyinka uu ku habo, uu haddana u ahaa kabtanka garoonka dhexdiisa ay ciyaartoydu kaga amar-qaataan.
Tababarihii hore ee Udinese ee Andrea Stramaccioni ayaa sheegay in Fernandes uu jecel yahay inuu xidho kabtanka, dhowaana la arki doona isaga oo Man United u ah kabtanka, waxaanu yidhi: “Bruno waa wiil aad u wanaagsan oo shaqsiyad fiican. Waa qof shaqo badan oo mar walba togan. Markii aanu wada joognay Udinese, in badan ayuu shaqayn jiray, fikirkiisuna wuxuu ahaa mid togan.
“Waxa hubaal ah inuu si degdeg ah u noqon doono kabtanka Manchester United, sababtoo ah, waa nin caqli badan. Waxa jecel taageereyaasha, waxa ixtiraama ciyaartoyda kooxdiisa iyo xataa kuwa kasoo horjeeda.”
Fernandes ayaa muddadii koobnayd ee uu joogay Manchester United waxa laga arkay astaamo hoggaamiye iyadoo mararka qaarkood loo malaynayay inuu yahay kabtanka kooxda marka laga eego sida uu ciyaartoyda u kala dirayo iyo sida uu u canaanto qofka qalad sameeya.